दाङका दुई जनामा कोरोनाको संक्रमण नरहेको पुष्टि – उजेली न्यूज
दाङका दुई जनामा कोरोनाको संक्रमण नरहेको पुष्टि
प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १६:५६
काठमाडौ १४ चैत्र
दाङमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका दुई युवामा त्यसको लक्षण नरहेको पुष्टि भएको छ ।
भारतको गोलगाँउवाट आएका घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ का १७ वर्षीय एक किशोर र जापानवाट आएका घोराहीका अर्का एक २६ वर्षीय युवाको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायममुकायम रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देबले शुक्रवार उनीहरु दुबैजनामा कोरोनाको संक्रमण फेला नपरेको जानकारी दिएका हुन् ।
दुई दिन अगाडि राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी उनीहरु दुईजनाको स्बाव लिएर आफैं काठमाडौं गएकी थिइन् । शुक्रवार मात्रै त्यसको रिपोर्ट सार्वजनकि भएको हो । काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले शुक्रवार उक्त रिपोर्ट दिएको हो ।
कोरोना भाइरसको आंशका पछि प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा भर्ना भइ उपचार गराई रहेका उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरेर घर पठाइने कायममुकायम रजिष्टार देवले जानकारी दिएका छन् । तर उनीहरुलाई घरमा गएपनि क्वारेन्टाइनमा बस्न सल्लाह दिने देवले बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानको आईसोलेनमा रहेर उपचाररत थप तीन जना आशंका गरिएका विरामीको रिपोर्ट भने अझैं आइपुगेको छैन ।
Previous: कोरोनाको औषधि भन्दै मेथानोल खाँदा इरानमा झण्डै पाँच सयको मृत्यु, सयौं बिरामी
Next: टेकु अस्पतालबाट कोरोना संक्रमित युवाको अन्तर्वार्ता : ‘म बाँच्छु, उच्च मनोबल छ’